Soomaaliya: Doorashada 2020/2021 | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Soomaaliya: Doorashada 2020/2021
Soomaaliya: Doorashada 2020/2021
Baraha bulshada iyo goobo kale waxaan ku arkaa in Guddoomiyaha Guddiga Madaxbannaan ee Doorashada Qaranka (GMDQ) Marwo Xaliima Ismail “Xaliima Yarey” ay 27 Maajo 2020 hortegi doonto Barlamaanka federaalka si ay ugu sheegto qabashada iyo qaabka fulinta doorashada 2020/2021 ama in waqti dheeraad ah loo baahan yahay (kordhin muddo xileedka BF iyo Madaxweynaha).
Ilo wareedyo kale waxaa iga soo gaaray in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u sheegay Wakiillada beesha caalamka inuu saxiixay sharcigii Doorashada hal qof hal cod 2020, GMDQ uu mas’uul ka yahay fulinta sharciga, haddii beddel ama ku noqosho loo baahan yahay-na in Barlamaanka Federaalka ku shaqo leeyahay. Sidaa darted, aysan jirin sabab uu Madaxweyne ahaan arrimaha doorashada 2020/2021 uga hadlo beesha caalamka, dowlad goboleedka, mucaaradka, iyo cid kale.
Dhinaca kale, waxaa la og yahay in sharciga doorashada ee Barlamaanka federaalka ansixiyay, Madaxweyne Farmaajo saxiixay uu yahay sharci laalan kala dhimman “impractical” ah, kaddibna guddoonka labada aqal ee Barlamaanka Federaalka u magacaabeen guddi ka soo shaqeeya qodobbo hortaagan dhaqangelinta Sharciga.
Waxaa kaloo Barlamaanka federaalka uusan ansixin sharcigii Xisbiyada oo Xisbiyada magac u yaalka looga dhigi lahaa xisbiyo rasmi ah. Waxaa kaloo dhimmaan xeerar, diiwangelin, xoreyn dhul ballaaran ee gogol xaar u ahaa fulinta sharciga doorashada halka qofka iyo halka codka.
Arrimaahaas iyo kuwo kale oo ay ugu daran tahay khilaafka ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo dowlad Goboleedyada waxay abuureen shaki laga qabo in Dowladda federaalka aysan rabin in 2020/2021 Doorasho xalaal ah dhacdo.
Madaama GMDQ aan loo gudbin sharciyo dhamneystiran iyo maaliyad ka hor muddo ku filan qabanqaabada doorasho xalaal ah watigeeda ka hor, ma garanayo sababta Guddoomiyaha ama xubnaha GMDQ u hortagayaan Barlamaanka Federaalka taaso ka baxsan waajibaadkooka shaqo.
Guddigii Barlamaanka Federaalka ayaa laga rabaa inay gutaan waajibkiisa tifaftirka sharciga, markaa kaddib dowlad Goboleedyada, Xisbiyada siyaasadda, bulshada ra’yidka, aqoonyahannada, warbaahinta ayaa laga rabaa inay ka falceliyaan ka hadlaan dhaqangelinta sharciga dhammeystiran, GMDQ u soo bandhigo dadweynaha soomaaliyeed habka dhaqangelinta sharciga ayadoo aan loo baahneyn inuu hortago Barlamaanka federaalka.
Waxaan qabaa in GMDQ aysan lugta la gelin arrin ku jirta talo siyaasadeed, sharci, iyo miisaaniyadeed.
Ma jirin sabab labada aqal ee Barlamaanka Federaalka u ansixiyaan sharci qabyo ah, aysan caddeyn fulintiisa, isla markaana ka gaabiyeen inay waqti hore dhamneystiraan sharciyada iyo xeerarka iyo maaliyadda looga baahan yahay fulinta doorasho xalaal ah ee HQHC ee waqtigeeda ku dhacda.
Waxaan rajeynaya in Guddoomiyaha GDMQ ka fiirsan doonto inay hortagto Barlamaanka federaalka, kuna ekaan doonto xuduudda sharciga iyo hab dhaqanka nidaamka dowladeed u dhigay guddiga doorashada.
Previous articleTaliyaha Nabad Sugida Fahad Yasiin oo ka soo dhex Muuqan Doono Golaha Wasiirada Cusub
Next articleMaamulka Gobolka Banaadir oo ka burburiyay dad Danyar ah Goobo ay ku Ganacsanayeen
Waa siyaasiga aan dhihi karo waa kan ugu da’da yar inta nagu matasha Baarlamaanka
Gudoomiyaha Gobalka Sh/Hoose Ibraahim Aadan Cali oo ka hadlay Qaraxii Maanta ka dhacay Deegaanka Lafoole ee Duleedka Muqdisho.
Madaxweyne Qoorqoor oo Gaaray Galinsoor ayaa sheegay iney tahay Goggosha Dib-U-Heshiinta...
Banaanbaxyo rabshado wata oo maalintii 3aad ka socda magaalada Minneapolis gobolka...
Dr. Ulusso “Hoteelada Muqdisho waxaa gaaf wareegaya dalaaliin u ololeynaya in...
Wasiir Fiqi oo Ciidan iyo tiknika kala wareegay Beesha Koonfurta...